XOG: Wararkii u dambeeyey Kulamadii ugu adkaa ee Muqdisho & Xogta la og yahay.
November 20, 2020 Sahuur Yuusuf 4
MUQDISHO(P-TIMES) – Hoggaamiyayaasha mucaaradka ee Soomaaliya ahna Musharaxiinta Madaxweyne-nimada doorashada loo madlan yaahy ee 2021-ka ayaa yeelanaya kulamadii ugu dambeeyey oo ay ugu diyaar-garoobayaan kulanka berrito dhexmari doona gudahooda oo ay uga wada hadlayaan arrimaha doorashooyinka iyo Guddiyada ay dawladdu magacowday oo ay diidan yihiin.
Kulamadii ugu dambeeyey ayaa dhexmaray Madaxweynayaashii hore & Raysalwasaarihii hore Xassan Cali Kheyre oo ay uga wada hadleen qorshaha la xariira doorashooyinka iyo kulanka berrito Ajendayaashiisa, waxaana xubnahan ay aad u soo qaadeen sidii looga dheeran lahaa wax kasta oo dhib u keenaya ummadda Soomaaliyeed.
Shirka mucaaradka ayaa socon doona 3 maalmood, waxayna ka dib soo saari doonaan warsaxaafadeed ay uga hadlayaan tabashooyinka ay dhawaan muujiyeen, iyo sida aysan ugu qanacsaneyn dhammaan xubnaha guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal & Dawlad gobaleed ee la magacaabay.
Cabdiraxman Cabdishakuur oo kamid ah xubnaha mucaaradka ayaa wararku sheegayaan in uu dadaal-galiyey sidii uu iskugu dayi lahaa in kulanka berrito ee Musharaxiinta uusan u garab-fariisan laheyn Raysalwasaarihii hore Xassan Cali Kheyre, balse qorshahan ayaa socon wayey, sida ay wararku sheegayaan.
Kulan gaar ah ayay yeesheen Xassan Cali Kheyre & Cabdiraxmaan Cabdishakuur, kaas oo looga hadlay arrimaha siyaasadda ee dalka iyo qodobada waqtigan taagan, taas oo meesha ka saaraysa sheegashadii Cabdiraxmaan ee kuwajahnayd eed uu katirsanayo Xassan Cali Kheyre.
Dhacdadii lagu weeraray Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay Xukuumadda Faderalka la xaqiijiyey in ay eheladii dadkii ku dhintay Mag ama diyada siisay ayaa kamid ah eeda ugu weyn ee siyaasigan ku dhaliila inta badan xubnihii xiligaas kamid ahaa Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya.
Villa Soomaaliya ayaa kulamadan kasocda gudaha Muqdisho u aragta maleegada siyaasadeed, waxayna horey u shaacisay xubnaha guddiga Doorashooyinka oo ay siyaasiinta badankoodu ka hor yimaadeen, taas oo ay hadda doonayaan in laga laabto, una arkaan Musharaxiintu kuwa aan lagu kalsoonan Karin.
Raysalwasaare kuxigeenka dalka Mahdi Guuleed ayaa dhawaan ku hanjabay in ay wareega koowaad, kusoo bixi doonaan Madaxweyne-nimada, isagoo ula jeeday in Farmaajo guuleysan doono warega koowaad, taas oo ay dad badan u fasirteen cabashada mucaaradka in ay tahay mid weyn oo taagan.
Beesha Caalamka ayaa habeen kahor ku baaqday in doorasho laysla ogol-yahay la wada qabto, taas oo ay dhammaan dhinacyadu u dhan yihiin ka qeyb noqoshadeda, guddiga Doorashooyinka ayaana la sheegay in ay noqdaan kuwa dhexdhexaad noqon kara, Iyadoo guddiga ay diidan yihiin Musharaxiintu uu yahay midka awooda u leh qabashada doorashada Xildhibaanada.
Musharax Xassan Cali Kheyre ayaa maanta ka digay in doorasho aan laysla ogoleyn laysku dayo in la qabto, isagoo sheegay in dadka Soomaaliyeed ubaahan yihiin dawladnimo, sidaas oo kale dhammaan loo baahan yahay doorasho 4tii sanaba mar la qabto, taas oo loo marayo hanaan sharci ah.
Adduunka siyaasadda wax loo wada dhan yahay kama jirto, wax la yiraahdo wada ogalna kama jirto,taasna waxaa fahmi kara dadka Ehelka u ah Siyaasadda,sharciga iyo Aqoonta Nadaamka Dowladnimada.
Waxay ilatahay in ragani xisbiyada kago tilnaamo mucaarad balse runtii ah qof jekigii xisbi ah,sida Soomaaliya maantay ay xisbi u taqaan.
Inta badan ragani waa ha lay arko,iyo kuwo hiray loo soo arkay.
Ama waa la idooran ama daadko i qaad baa dhaci.
Siyaasada Soomaaliya ee qabaa’ilka ku dhisan la saadkin karo cuda ku guulaysan,balse haddii musharixiin badan oo isko meel ka soo jeeda ay doorashada u tartamaan,waxay u badan tahay in ay iyago is reebaan, taasina waxa ay keeni in Madaxwayne farmaajo guulaysto.
Mahdi Wais says:
Nin qareen waayey ayaa khayre weheshaday! Shaw ilma Gabre ayaad ahaydeen, niman mucaarid ah guddiga doorashada hakay ka soo gelayeen? Xeerkee u oggolaanaya? Shaqada dawladda miyaa ilma fawdo lagala tashan ayaad filaysaa?
Waligee ma arag umad dalkooda, dintooda, dadkooda iyo dadnimadooda loosoo aqrinaa oo ugala tartamaa shisheeyo.wali ma aragtay mucaarad Kenyan ah oo muqdisho ama wadan kale kushiran, haduu isku dayo arintas si toos ah loo maxakameen.maxaa kaqaldan Somaalida miyee arkeenin ninja wadinika ah?